Dowladda Soomaaliya Oo Ciidamo Cusub Oo Booliis Ah Geysay Kantaroolada Laga...
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo cusub oo Booliis ah geysay kantaroolada laga…
Jimco, Juun, 4, 2021 (Wararka-Maanta) – Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo cusub oo Booliis ah geysay kantaroolada laga sugo ammaanka Wadada hormarta Maxkamadda Gobolka Banaadir iyo Xabsiga Dhexe.Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii halkaas laga wareejiyay ciidamo asluubta oo lagu eedeeyay in ay halkaasi maalmo ka hor ku rasaaseeyeen kolonyo galbinaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh.
Guddi loo saaray dhacdadaas ayaa ku taliyay in ciidamadii horey u joogay laga wareejiyo aaggaas kadib markii la ogaaday in tiro dhowr jeer ah lagu xabbadeeyay masuuliyiin dowladdeed iyo saraakiil ciiddan.
Wararka Maanta : Faahfaahino kasoo baxaya dagaal ka dhacay deegaanka Hoosingow ee gobolka...
Xildhibaan iyo siyaasiyiin katirsan mucaaradka ayaa soo dhoweeyay talaabadan, waxayna uga mahad celiyeen raysal wasaaraha Soomaaliya oo ay sheegeen inuu talaabo ka qaaday ciidamadii asluubta ee lagu eedeeyay falka dhacay.
Taliyaha ciiddanka asluubta Soomaaliya Gen. Mahad Cabdiraxman Aadan ayaa ugu baaqay masuuliyiinta dowladda ee waddooyinkaan isticmaala in ay isku sheegaan ciidanka amniga sugaya, si looga baaqsado isafahan waa.
Related Topics:BooliisCiidamoCusubDowladdaFeaturedgeysaykantarooladaLagasomaliweyn wararka maantaSoomaaliyaWararka Maantawararka maanta - bbcwararka maanta 2020 somaliwararka maanta 2021wararka maanta ethiopiawararka maanta hiiraan onlinewararka maanta muqdishowararka maanta muqdisho 2021
Muqdisho : 5 dhalinyarro ah oo ku dhintay xeebta Liido, kuwaas oo qaar…
Jenaraal Xuud oo Rooble uga digay ‘qorshe uu damacsan yahay’ – Caasimada…
Haweeney ka tirsaneyd maamul degmo oo lagu dilay Muqdisho – Caasimada …
Soomaalida Islii oo dhibaato ku qaba xirnaashaha Safaaradda Soomaaliya…
Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran oo markale shir ku yeelanaya magaalada…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Faah faahino dheeri ah ayaa waxaa laga helayaa dil qorsheysan oo saaka dabley hubeysan ay ka geysatay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Dilka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi, waxaana loo geystay haweeney magaceeda lagu soo koobay Suldaano.
Wararka ayaa sheegaya in haweeneydaasi ay la shaqeyneysay maamulka degmada Karaan, isla-markaana ay ka tirsaneyd guddiga xalinta khilaafaadka maxkamadda degmadaasi.
Wararka Maanta : Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo fariin u diray Saraakiisha iyo ...
Kooxihii ka dambeeyey toogashada marxuumadda ayaa goobta isaga baxsaday, kadib dhacdadaasi, sida ay goobjoogayaal u sheegeen Shabakadda Wararka Maanta.
Sidoo kale waxaa meesha uu dilku ka dhacay daqiiqado, kadib gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi.
Ma jiro sidoo kale weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Kaaraan oo ku aadan falkaasi dilka ah.
Waa dilkii labaad ee saacado gudahood ka dhacaya Muqdisho, waxaana xalay degmada Dayniile kooxo hubeysan ay ku dileen guddoomiye waaxeed ka tirsanaa degmadaasi.
Si kastaba maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha caasimada ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, sida dilal qorsheysan iyo qaraxyo geystay khasaare kala duwan.
Talaado, Juun, 22, 2021 (Wararka-Maanta) – Raysal wasaaraha Soomaaliya, madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay kulan kuwada yeeshay Aaladda wadahadalka khadka Zoom-ka.Kulanka xalay ku dhexmaray madaxda golaha wadatashiga qaran khadka Zoom-ka ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashoyinka dalka, waxayna isla meel dhigeen in Sabtiga soo socda isugu yimadaan magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale wararku sheegayaan in shirka aay isugu imaanayaan golaha wadatashi qaran aay hortagi doonaan guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka dalka si aay usoo bandhigaan qorshayaasha ku saabsan doorashooyinka dalka ka dhaceyso.
Wararka Maanta : Somaliland: Mid kamida degmooyinka aad ka loo sugayay oo lagu dhawaqay...
Xafiiska Raysal wasaaraha Soomaaliya oo loo xilsaaray hirgelinta doorasho xor iyo xalaal inuu ka qabto dalka ayaa u muuqanaya mid dardargelinayo howlaha culus ee horyaala.
Wararka Maanta : Xukuumadda oo shaacisay wadahadal khadka Taleefanka ku dhexmaray Rooble iyo...
Wararka Maanta : Jenaraal Xuud oo Rooble uga digay 'qorshe uu damacsan yahay' - Caasimada...
Wararka Maanta : DEG DEG: Rooble oo shaaciyey liisaska dhammaan guddiyada doorashada da...
Wararka Maanta : Deg Deg: Kiiska Ciidamada la waayey oo Weji kale yeeshay, Toosh lagu ifiyey...
Wararka Maanta : Xubno ka tirsan guddiyada doorashada oo lagu eedeeyey inay dambiileyaa...
Wararka Maanta : Soomaaliya oo bisha September lumin karta xuquuqda codbixinta Golaha Guud...
Wararka Maanta : Faahfaahino kasoo baxaya qarax Caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta Heshiiska MD Farmaajo & RW Rooble, Liiska Guddiga Doorashada...
Warka Caalamka28 mins ago
Wararka Somali53 mins ago